Ny Baiboly atao indray mitopy maso: Ny Testamenta Taloha (1)
"Atongilano ny sofinareo, ka mankanesa at? amiko - Mihainoa, dia ho velombelona ny fanahinareo; ary hanao fanekena mandrakizay aminareo Aho." Isaia 55:3
Ny Testamenta Taloha dia manomboka amin’ny Genesisy, izay mitantara ny fomba namoronan’Andriamanitra ny olombelona sy nametrahany azy ho eo afovoan’ny voary. Azon’i Adama nihinanana avokoa ny hazo rehetra tao amin’ny saha Edena, afa-tsy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy (Genesisy 2:16-17). Nefa Adama sy Eva tsy naneho ny fahatokisany sy ny fankasitrahany ary ny fitiavany an’Andriamanitra, fa naleony tsy nankatò Azy, ary amin’izany izy ireo dia nandà ny fahefan’Ilay Mpahary. Dia noroahin’Andriamanitra hiala tao amin’ny saha Edena izy ireo.
Koa ny Testamenta Taloha manontolo dia mampiseho ny fomba nataon’Andriamanitra, talohan’ny nahaterahan’i Kristy (Ilay Mesia), hamerenana indray ny fifandraisana amin’ny olona, fifandraisana tapaka noho ny ota.
Andriamanitra dia nanorina fanekena iray voalohany tamin’i Noa (Genesisy 9:9-7), avy eo tamin’i Abrahama sy ny taranany, izay hanjary ho firenena Israely (Genesisy 12:1-3; 17:1-21), manaraka izany ny fanekena amin’ny Lalàna, tamin’ny alalan’i Mosesy (Eksodosy 24:7; 34:1-28). Nohavaoziny imbetsaka ireo fampanantenana nataony ireo.
Ny Pentateoka (ireo boky dimy voalohany ao amin’ny Baiboly), ny boky tantara (boky 12), ireo boky tononkira (boky 5) ary ny boky faminaniana (boky 17) dia mirakitra ny tantara misafotofoto teo amin’ny fifandraisan’Andriamanitra sy ny olony. Ambaran’ireo boky ireo koa ny vaovao mahafalin’ny hahatongavan’ny Mesia, izay hanomboka fifandraisana hafa amin’Andriamanitra sy ny olona, miorina amina fanekena vaovao (Jeremia 31:31-34). Tamin’ny nanaovany sorona ny ainy, Kristy, Ilay Zanak’Andriamanitra, no nanorina io fanekena vaovao io, izay maharitra mandrakizay, ary Izy no hany Mpiantoka izany.